Intlawulo kwaye izibonelelo unemployed pregnant abafazi kwi-Russia - Umfazi Ka-Trend
Mhlawumbi, wonke pregnant umfazi ngu anomdla izibonelelo ukuba ingaba yokuxhomekeka kumanzi ngomhla wakhe ukususela state. Kwaye ukuba elizayo umama akazange kuba i-esemthethweni umsebenzi, oko kwaba housewife okanye hayi kanti ugqibile kwayo uphando (mbasa a student), ngoko unako enjalo pregnant unemployed nethemba loluntu uncedo. Uyakwazi mba amaxwebhu ukufumana inzuzo kwi-nearest-Ofisi Loluntu Ukukhusela abantu behlabathi (enze udliwano-ndlebe). Nangona kunjalo, intlawulo ukuba ingaba financed ukusuka ezentlalo-ntle i-Inshorensi-Mali (izibonelelo kuba pregnancy kwaye childbirth nabafazi ababekho ebhalisiweyo ngomhla antenatal ekliniki kwi-kwangethuba stages (phambi elinesibini weeks) pregnancy) unemployed pregnant abafazi musa rely, kodwa pregnant student studying kwi-contractual qho ngonyaka we-isigxina kwisebe, banako ukufumana. Kuba pregnant ibhinqa student ukufumana maternity imali evunyelweyo, yena iimfuno ukungenisa ingxelo kagqirha isiqinisekiso efanelekileyo ifomu e endaweni imfundo. Emva kokufaka i amaxwebhu kwiintsuku ezilishumi zomsebenzi, yena ngu obliged ukuba uhlawule imali omnye scholarship kwaye omnye-ixesha inzuzo malunga ubhaliso kwi-loomama luhlomle kuwo e i phambi kwexesha umhla (ukuba ikhona). Kuba izibonelelo kuba childbirth kwaye ngenyanga imali evunyelweyo kuba kuye, student kuza yobulali yokhuseleko lwezentlalo kwaye ukuzisa amaxwebhu. Umama-student abo babengengabo sebenzisa i maternity leave, ngenyanga imali evunyelweyo ufumana imali kwi-kanye le wokuzalwa umntwana.
Sasha:»unxulumano kunye liquidation wam inkampani, mna ke abalawuli ngomhla we- februwari, ebutsheni Unakho, mna ukufumana phandle ukuba ndiza pregnant. Endinazo i maternity imali evunyelweyo.»Undoubtedly, zonke ngasentla izibonelelo (one-ixesha yolwazi kuba BIS, imali evunyelweyo kuba abafazi abo bamele ebhalisiweyo kwi-kwangoko stages ka-pregnancy, childbirth imali evunyelweyo, ngenyanga imali evunyelweyo kwi umntwana phantsi.
kwiminyaka emihlanu ubudala) enjalo pregnant umfazi ngaphandle esemthethweni umsebenzi relies
Kwezinye iimeko, xa umfazi akazange officially umsebenzi phambi pregnancy, okanye resigned phambi kwayo offense, ngoko ke inzuzo BiR akuvumelekanga. Ukuba umfazi sibhaliswe kunye imisebenzi yenkonzo, ke yena uya kufumana-ngqesho intlawulo kuphela phambi ukuqala B R vacation. Emva kokuba kunikezelwe abagulayo shiya ukuba Imisebenzi Embindini, unemployed pregnant umfazi ngu exempt ukusuka yakhe ndwendwela. Emva kokuba isiphelo shiya, intlawulo loluntu uncedo kuba intswela-ngqesho uza phindela, ngaphandle kokuba umfazi lilungile ukuya emsebenzini.
Kungenjalo, yerente lizaku kucinywa de umntwana u
kwiminyaka emihlanu ubudala
WTO - Accessions: isirashiya